Autumn, ikakhulukazi ngo-Okthoba - isikhathi ephelele ukuze bathathe uhambo. Uma ufuna ube nesikhathi esihle esimweni ethokomele autumn, isixazululo omuhle kungaba ukuya Minsk ngo-Okthoba. Ngakho, yini ukubona e inhloko-dolobha Belarus ekwindla? Lokhu Kuzoxoxwa.
Isimo sezulu e Belarus ngo-Okthoba
Ngesikhathi ukuphakama yokuwa ubunjalo Belarus ikhange ikakhulukazi, njengoba lezi izingxenye sezulu kuzokuvumela ujabulele ukubuka, nakuba kungase kube kushintsha izinga lokushisa nasemvuleni. Ngokwesilinganiso, isimo sezulu emini ekuqaleni kwenyanga ilingana degrees 12, kuyilapho closer phetho lehla +6.
Okthoba - ngenyanga simo esishubile, njengoba besho, "ekhala, bese uyahleka," okubhekisela emhlabathini we ukuhwebelana abukhali phakathi kwelanga sezulu efudumele, ephelele ukuhamba, futhi isivunguvungu nemvula.
Kulo mBhalo, esingcono kakhulu ukuzijabulisa bazovakashela izenzakalo ezihlukahlukene e Minsk kule nyanga. Uma isimo sezulu akudingeki sizungeze umuzi kanye nokusakazwa esikhumbuzo yezakhiwo, sincoma ukuthi babheke ukuthi izinhlelo ekhonsathini, uma efika e Minsk ngo-Okthoba.
Amakhonsathi e Minsk
Amakhonsathi e Minsk ngo-Okthoba ahlukahlukene - kusuka umculo we-classic kuzinhlobo zanamuhla futhi intsha. Muscovites kusimangaze ngokuyinhloko iphansana ithikithi amanani, ukuze ku Minsk ngo-Okthoba okufanele uhambe ngayo ngisho ngakho.
The Belarusian State Philharmonic njalo elibamba izinsuku evulekile enesihloko esithi "zabuna engiyithandayo." State Academic Symphony Orchestra weRiphabhulikhi Belarus ukuze Umculi Wabantu waseBelarus Aleksandrom Anisimovym wokuba umbhidisi iimsebenzi lezo owaziwa emhlabeni-class bomculo ezifana Tchaikovsky, Chopin, Khachaturian futhi Sviridov.
Palais des Ezemidlalo kuvame labetibambile amakhonsathi enkulu izinkanyezi ngamazwe, kusukela Depeche Mode ukuba nabadlali edume kunayo ezihlukahlukene yasekhaya. Esikhathini amakilabhu amancane concert amahholo ungaya kunabaculi bands zendawo namaqembu ukuthi ayinala kangaka kuleli zwe.
Ngokukhethekile kungabanga ukukhuluma amaqembu ezizwe, kanye cocktail esiyingqayizivele zomculo we izitayela owayephila futhi ethandwa umculo Belarusian. ой, но одновременно такой близкой нам культуры, вы сможете за считанные гроши, в отличие от поездок в Египет или Турцию. Kungihlaba umxhwele ukuthi ubuqobelo lesibili, kodwa ngesikhathi esifanayo usondelene kakhulu kithi isiko, uzokwazi ukuba okwesikhathi amapeni ezimbalwa, ngokungafani uhambo lokuya eGibhithe noma Turkey.
Amahholo Movie e Minsk
Uma une isikhathi sokuvakashela izenzakalo main zomculo ngokwemvelo, ungakhohlwa mayelana ebhayisikobho. Enhloko-dolobha, kukhona izindlu eziningi ezinjalo, phakathi okuyinto ubuswa ebhayisikobho "Okthoba". Minsk eziningi lokho lihlotshaniswa ukubukeka yezakhiwo kwesakhiwo, eyaziwa kulo lonke izwe elaliyiSoviet Union ngaphambili. Namuhla e-cinema ukubukela kudlalwé novelties we cinema emhlabeni, kuyilapho yokukhokhela amathikithi incane kakhulu ukwedlula eMoscow noma Petersburg.
Uma unquma ukuya ngempelasonto e Minsk ngo-Okthoba, ngisho noma isimo sezulu ayikuvumeli ukuthatha uhambo emigwaqweni kulo muzi emangalisayo, ungavakashela imicimbi yamasiko-dolobha.
Ingabe Kungenzeka ukunciphisa umzimba uma ungadli ngemva kuka 6 pm - izimfihlo Ukudla.
Amasofa ngaphandle izingalo "inkositini" - alo ifenisha kuzo zonke ekhaya